ဝက်ဘ်ဆိုက်ယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးတစ်ဦး - ဗီဒီယိုချက်တင်-အကောင်းဆုံး!
နှင့်တွေ့ဆုံအမျိုးသမီး Madurai အတွက်:အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း
မှတ်ပုံတင်ခြင်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုက်ပေါ်တွင်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အတည်ပြုသင့်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုအတွက်ရှာဖွေနေစတင်အသစ်သောချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်အတူအမျိုးသမီးအတွက် Maduraiတမီးလ်နာဒူးနှင့်ချက်တင်အတွက်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းနှင့်သိုင်းမရှိဘဲကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်။ တွေ့ဆုံပြီးစကားပြောနှင့်အတူအမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်အ Madurai နှင့်လုပ်လုံးဝအခမဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်မရှိကန့်သတ်အပေါ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စာပေးစာယူ၊အတုအကောင့်အသစ်များနှင့်ထိန်း။ ငါတို့သည်သင်တို့ရှိရှာတွေ့သောသူသည်လူများအသီးအသီးအခြားတွေ့ဆုံသီးအသီးအခြားနှင့်ဆက်ဆံရေးသို့ရ။ မှတ်ပုံတင်သင့်စာမျက်နှာကိုအပေါ်ဆိုက်တာဝန်ခံ၏လုံးဝအခမဲ့။ တည်ပြုဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုအတွက်ရှာဖွေနေစတင်အသစ်အသိအကျွမ်းနှင့်အတူအမျိုးသမီးအတွက် Maduraiတမီးလ်နာဒူးနှင့်ချက်တင်အတွက်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းနှင့်သိုင်းမရှိဘဲကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ကန့်သတ်။
बिले आणि महिला सांता क्रुझ दे टेन्र्फ, कॅनरी बेटे.
၁၈ မှတ်ပုံတင်ခြင်းရွေးချယ်စရာ ဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်းချိန်းတွေ့မိန်းကလေးများအခမဲ့ စူးစမ်း အခမဲ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုနိဒါန်း ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအခမဲ့ ၁၈ ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊အခမဲ့မရှိပါ မိန်းကလေးများချိန်းတွေ့ ချိန်းတွေ့ဆိုက်အတွက်အလေးအနက် ချက်တင်ကစားတဲ့နှင့်အတူအွန်လိုင်းအဆိုပါဖုန်းနံပါတ် ချိန်းတွေ့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအခမဲ့